Wholesale Dianhong Gongfu tii ndeyavatema tii chikamu Mugadziri uye Mutengesi | Maokun
Dianhong Gongfu tii ndeyeboka revatema tii. Iyo neDianhong yakapwanyika tii nhema inowanzotengeswa kuEastern Europe nyika dzakaita seRussia nePoland, pamwe nenyika dzinopfuura makumi matatu nematunhu ekuWestern Europe neNorth America. Inotengeswa mudzimba mumaguta makuru kutenderera nyika. Zvinwiwa zvaDianhong zvinonyanya kusanganiswa neshuga nemukaka, uye kunhuwirira uye kuravira mushure mekuwedzera mukaka zvichakasimba. Dianhong Gongfu Tea ndeye yakanyatso kuviriswa tii ine inodziya hunhu. Kunwa hakuiti kukurudzira dumbu uye kwakanakira muviri.
Dianhong Gongfu Mavambo
Dianhong Gongfu inonyanya kugadzirwa muLincang, Baoshan nedzimwe nzvimbo muYunnan. Yunnan iri muganhu wezasi kumadokero kweChina. Nzvimbo yenzvimbo iri pakati pe97 ° ~ 106 ° E kureba uye 21 ° 9 '~ 29 ° 15'N latitude. Yunnan ine mamiriro ekunze ekunaya uye anopisa mumwaka mumwe chete uye yakaoma uye inotonhorera mumwaka mumwe chete. Iyo tembiricha yepakati pagore inochengetwa mukati meiyo yakasarudzika renji ye15 ° ~ 18 °, inonzi "biological eugenic zone" nemasayendisiti.
Dianhong Gongfu kugadzirwa kwemaitiro
Imwe, yekutanga system
Dian nhema tii inogadziriswa neina maitiro ekuomesa, kuumburuka, kuvirisa nekuomesa iwo matsva mashizha emiti tii. Maitiro ekuisa matsva uye manyoro tii mashizha akangonhonga kubva pamuti pairi yemhepo bamboo keteni yekuparadzira mvura inonzi kunhuwa. Kana iyo mvura yarasika kune imwe nhanho, mashizha tii anozoita wilted ndokuzoiswa mune ribbed twist. Kanya mumushini kuti uite muto wetii ubve uye mashizha eti ave zvimiti. Mashizha eti akakangwa anoiswa mutirayiti yemuti. Pasi pemamiriro ekushisa akakodzera uye hunyoro, iwo tii mashizha zvishoma nezvishoma anotendeuka akatsvuka uye anoburitsa hwema hweapuro. Panguva ino, isa mashizha tii mune aomesa uye woakanya muIyo kana yaita hupfu, nhema tii inogadzirwa zvinobudirira.
Kuomesa kunoreva mashandiro anoita mashizha matsva kurasikirwa nemvura kwenguva yakati rebei, zvichikonzera mashizha emashanga akaomarara kuti dziwande uye kuoma. Ndiyo yekutanga maitiro mukutanga kugadzirwa kweti nhema. Mushure mekuwoma, mvura inogona kuve yakanyatsopwa, mashizha akapfava, kuomarara kunowedzerwa, uye zviri nyore kuumbika.
Chinangwa chekutunga tii nhema chakafanana neicho cheiyo green tii. Mashizha etii anoumbwa panguva yekutenderera uye anowedzera iwo ruvara uye kuravira kwekusanganisa. Panguva imwecheteyo, masero emashizha anoparadzwa, ayo anobatsira kukosheswa kunodiwa pasi pechiito chema enzymes uye inofambisa kufambiswa kwakanaka kwekuvirisa.
Fermentation idanho rakasarudzika mukugadzirwa kweti nhema. Mushure mekuvira, iro shizha ruvara runochinja kubva pagirini kuenda kune tsvuku, ichiumba hunhu hunhu hwetema tii, matsvuku mashizha uye muto mutsvuku.
Kuomesa inzira yekubheka iyo yakaviriswa tii magidhi pane yakanyanya tembiricha kuti ikurumidze kubuda mvura kuti ibudirire uye kuoma.
Kuchenesa kugadzirisa kusimudzira kwehunhu hwechigadzirwa. Chaizvoizvo kuita kwekuparadzanisa kwemuviri uye nzira inodiwa kuti tii ive nehunhu hwezvinhu. Basa rekuchenesa tii tekinoroji kuita kuzadzikisa chinangwa chekugadzirisa, kugadzirisa chimiro, kupatsanura zvakakosha, kubvisa kushomeka, uye kudzora hunyoro kuburikidza nekuparadzanisa, shanduko, uye kusanganisa kwekuongorora, kuurutsa, kurongedza, yunifomu murwi, uye moto wekuwedzera.
Pashure: Bai Lin Gong Fu Hong Cha Tea neChineseTea
Zvadaro: Jiuqu Hongmei West Gungwa Gongfu Nhema Tea
Dema Dhiragoni Tea
British Nhema Tea
Ctc Nhema Tiyi
Chirungu Kudya kwemangwanani Nhema Tii
Bvisa Nhema Tea
Chinese Chai Tiyi Yingde Hong Cha
Wholesale Nhema Tea 100% Natural Hutano Yixing ...
Kungfu tii ye Wholesale Yepamusoro Hunhu Organic
Qimen Nhema Tea Premium Qi Hong Jinzhen 2021 Ne ...
Wholesale Yepamusoro Yemhando Dema Tii